20 Imivuzo yeGrammy Award engayibalekiyo
Umculo Umculo kunye neBlues
20 Iimbasa zeGrammy eziPhambili zeMigangatho yexesha lonke
UMichael Jackson, uNkosana, kunye noBeyonce Ukhokelo Loluhlu
Ukususela kumcimbi wokuqala ngoMeyi 4, 1959, iAgrammy Awards iye yaba yinto ebonakalayo enkulu yeetalente ezinkulu zomculo kwihlabathi. Nantsi ukukhangela kuma-20 amaGrama amaGrama amakhulu kunazo zonke , kubandakanywa ukubukeka ngu-superstars u-Beyonce, iNkosana, uStevie Wonder, u-Whitney Houston, uJames Brown, uMarvin Gaye, uTina Turner, u-Alicia Keys, u-Justin Timberlake, uFerrell Williams, u-Usher, UJanet Jackson, uMary J. Blige, kwaye kunjalo, "uKumkani wePop" uqobo, uMichael Jackson.
Ngo-Matshi 2, 1988-UMichael Jackson kwi-Award ye-Grammy ye-30 yonyaka
Umichael Jackson. Dave Hogan / Getty Izithombe
UMichael Jackson wathola i-Grammys engama-13 ngexesha lomsebenzi wakhe, kubandakanya iirekhodi ezisibhozo kwii-Grammy Awards zonyaka ezingama-26 ezaziqhutywa ngo-Februwari 28, 1984 kwi-Shrine Auditorium eLos Angeles, eCalifornia. Iminyaka emine kamva, wanikela umsebenzi omkhulu kwiGrammy yembali kwi-30 ye-Grammy Awards yaminyaka yonke engama-30 eyabanjwe ngoMatshi 2, 1988 kwi-Radio City Music Hall eNew York. Wahlabelela "Indlela Ongenza Ndive" kunye ne "Man In Mirror" evela kwi-CD yakhe embi eyayikhethwe i-Albhamu yonyaka.
NgoFebruwari 8, 2004 - iPrince / Beyonce kwii-Grammy Awards zama-46 zeeNyaka
UBeyonce kunye neNkosana benza ii-Grammy Awards zika-2004. UMichael Caulfield / WireImage
Iingcali ezimbini ezinamandla kunye nezobukrakra emhlabeni, iPrince noBeyonce, babumbene ukusebenza okungalindelekanga kwi-46 ye-Grammy Awards yonyaka we-46 ngo-Febhuwari 8, 2004 kwi-Staples Centre eLos Angeles, eCalifornia. Bavule umboniso, batyhafisa abaphulaphuli nge-medley ye-hit "Rain Purple," "Bantwana Ndiyinkwenkwezi," kwaye Makhe Sihambe Ngesiqhelo, "kwaye yakhe yokuqala yedwa," UChawn In Love, "ekhethwe Amabhaso amathathu, kuquka neRekhodi Yonyaka.Ulo busuku, uBeyonce wabopha ingxelo ye-Grammys emihlanu ephumeleleyo ngumculi wesibini ngomnyaka owodwa, irekhodi elaphosa ngo-2010 xa efumana amabhaso ayisithandathu.
Ngonyaka we-2004, wahlonishwa ngo-R & B Best Song kunye ne-Best Rap / Sung Ukubambisana ngo-"Crazy In Love" kunye noJay-Z, umgangatho ophezulu we-R & B osebenzayo. "I-Closer Ifika Kuwe" kunye noLuther Vandross, kunye ne-Best Contemporary R & B Album eyingozi kwi-Love .
NgoFebruwari 10, 2008 - UBeyonce / Tina Turner kwii-Awards ze-Grammy zama-50 zonyaka
UBeyonce kunye noTina Turner benza kwi-50 ye-Grammy Awards kwi-Centre Staples ngoFebruwari 10, 2008 eLos Angeles, eCalifornia. Kevin Mazur / WireImage
Emva kweminyaka emine emva kokugqithisa isigaba ngeNkosana kwi-Awards ye-Grammy ye-46 yeeNyaka, uBeyonce waphinde wabeka iGrammys ngomlilo, ngeli xesha kunye nesithixo sakhe, uTina Turner. Bazisa indlu phantsi kwe-50 ye-Grammy Awards e-Staples Centre eLos Angeles ngoFebruwari 10, 2008 kunye nokusebenza komdlalo we-Ike kunye noTina, "Uqhayisa uMariya." U-Turner wayebuyela kwisiteyimu emva kwe-hiatus yonyaka wesixhenxe, kwaye uBeyonce wammisela njengengqungquthela "ephethe" ubuhle, umphefumlo, umxhwele, amandla, kunye netalente "yezona zinto zenziwa ngabasetyhini. Ngobo busuku, u-Turner waphumelela iGrammy yesibhozo, i-albhamu yonyaka, i-CD ye-Joni Mitchell yerhafu eyabhalwa nguHerbie Hancock kunye no-Turner kunye namanye amacwecwe.
NgoFebruwari 22, 1989 - i-Whitney Houston kwi-Awards ye-Grammy ye-31 yonyaka
Whitney Houston. Mick Hutson / Redferns
U-Whitney Houston "Omnye Umzuzu Ngexesha" wakhethwa kwiNtsebenzo yePopular yeVocal Performance kwii-Grammy Awards ze-31 zonyaka. Nangona akazange aphumelele, ukusebenza kwakhe kokuvula kwakuyimpawu ebalulekileyo yemilingo ngo-Febhuwari 22, 1989 kwi-Shrine Auditorium eLos Angeles, eCalifornia.
Ngomhla ka-1 Matshi 1994 - i-Whitney Houston kwi-36 ye-Grammy Awards
I-Whitney Houston kuma-Grammy Awards ka-1994. Larry Busacca / WireImage
Ngomhla ka-1 Matshi 1994 kwakuyi-Whitney Houston ngobusuku kwi-36 ye-Grammy Awards eyaqhutywa kwi-Radio City Music Hall e-New York njengoko wawuthatha ama-trophies amathathu kuquka i-albhamu yonyaka we -Bodyguard Original Soundtrack. Wabeka umnqweno wakhe ngokuhlwa kunye nokusebenza kwakhe okumangalisayo kweengoma zakudala eziye zaphumelela kwiRekhodi Yonyaka, kunye neNtsebenzo engcono kakhulu yeVocal Performance, Owesifazana, "Ndiza Kuhlala Ndikuthanda."
NgoFebruwari 12, 2012 - uJennifer Hudson kwii-Awards ze-Grammy zama-54 zonyaka
Umnxeba u-Hudson wenza umvuzo ukuya ngasekupheleni kukaWinney Houston kwi-Grammy Awards ka-2012. John Shearer / WireImage
Ihlabathi laxatyiswa ngokufa ngokukhawuleza kwe-Whitney Houston ngoFebruwari 11, 2012 eBeverly Hilton Hotel KwiBeverly Hills, eCalifornia, nje iiyure ngaphambi kokuba ahlele ukuya kwilungu le-pre-Grammy elineenkwenkwezi ezaphambi kweenkwenkwezi ezazisungulwa ngumcebisi wakhe, uClave Davis . Ngobusuku obulandelayo, kwi-54 ye-Grammy Awards kwi-Centre Staples eLos Angeles, omnye wabavakalisi bakhe abakhulu, uJennifer Hudson, wahlabelela isithandwa sakhe kwisithixo sakhe esasisondeleyo, ingoma yomculo yaseHoston, "Ndiza Kuhlala Ndikuthanda."
Jan, 26, 2014- Stevie Wonder / Pharrell Williams / Nile Rodgers ngo-56 ka-Ann. Grammys
Nile Rodgers, uStevie Wonder noFerrell Williams benza ngexesha lama-Grammy Awards kwi-56 kwi-Staples Centre ngoJanuwari 26, 2014 eLos Angeles, eCalifornia. Kevork Djansezian / Getty Izithombe
U-Daft Punk uqhube ama-Grammy Awards wama-56 ngo-Januwari 26, 2014 kwi-Staples Centre eLos Angeles, eCalifornia ezuze ama-awards amahlanu, kuquka ne-Album yeNyaka ye- Random Access Memories , kunye neRekodi yonyaka, "Yiba Lucky" ephethe i-Pharrell Williams kunye neNayile yecitarari Rodgers waseChic. Ukugqwesa kokuhlwa kwakungumsebenzi wabo we-"Get Lucky" ngokumangaliswa ngumhambi kaStevie Wonder, ephethe ukukhishwa kwiClassic, "Le Freak," elandelwa nguWonder "Enye iMoya."
NgoJanuwari 31, 2010 - UBeyonce kwi-Award ye-Grammy Ami-52
UBeyonce wenza ii-Grammy Awards zika-2010. UMichael Caulfield / WireImage
UBeyonce wabeka irekhodi leMigangatho ye-Grammy Awesithandathu eyadlalwa ngumculi wesibini ngobusuku obunye ngoJanuwari 31, 2010 kwi-Award ye-Grammy Awards yama-52 e-Staples Centre eLos Angeles, eCalifornia. Ukuhlonipha kwakhe kwakubandakanya Ingoma Yonyaka 'Yabafazi Abangashadile (Beka Umtya),' kwaye wabeka isitampu sakhe kwisiganeko ngokusebenza kwakhe "Ukuba Ndingumfana" kwaye "Wena Oughta Know."
NgoFebhuwari 27, 2002 - u-Christina Aguilera / Pink / Mya / Lil Kim kwi-Grammys yama-44
I-Pink, uKristuina Aguilera kunye noMya ngethuba lama-Grammy Awards ka-44 kwi-Febhuwari 27, 2002 kwi-Staples Centre eLos Angeles, eCalifornia. UJeff Kravitz / FilmMagic, Inc
Ngenye yeyona ndlela eyenziwa ngayo kwiGrammy imbali yenzeke kwi-44 ye-Grammy Awards eyayibanjwe ngoFebhuwari 27, 2002 kwiSpaples Centre eLos Angeles, eCalifornia xa uKristina Aguilera, Pink, Mya, noLil Kim behlabela uLabelle, "Lady Marmalade" kwi-soundtrack yaseMoulin Rouge . Ukukhahlela kwilinen enqabileyo, abafazi bahlanganiswa kwi-Patti LaBelle, kwaye bawina iGrammy
UkuBambisana okuPhambili kwePapa kunye namaVocals.
NgoFebruwari 20, 1987 - iWotney Houston kwi-29 ye-Grammy Award
I-Whitney Houston kuma-Grammy Awards ka-1987. Chris Walter / WireImage
Ingqungquthela kaWhitney Houston ethi "Uthando Olukhulu Kakhulu Lonke" lonyulwa kwiRekhodi Yonyaka kwi-29 ye-Grammy Awards yonyaka ka-29, ngo-1987. iingqondo emva kokusebenza ngamandla kukaHouston kwingoma eShrine Auditorium eLos Angeles, eCalifornia.
NgoFebruwari 8, 2006 - UAlicia Keys / uStevie Wonder kwi-Grammys yama-48 yonyaka
U-Alicia Keys noStevie Wonder kwi-Grammy Awards ka-2006. Bob Riha Jr / WireImage
UStevie Wonder no-Alicia Keys benza inkokhelo ekhuthazayo kumaxhoba weNkantyambo Katrina kwi-48 ye-Grammy Awards yonyaka wama-48 eyabanjwe ngoFebruwari 8, 2006 kwi-Staples Centre eLos Angeles, eCalifornia. Babengabalandeli bokuqala emthendelekweni, kwaye uKeys wathi, "Asinakukunyamekela ukuba unyaka odluleyo ube ngumnxeba kubantu abaninzi kuquka abahlobo bethu baseNew Orleans - eso sixeko somculo - kunye neGulf Coast. "Wamangalisa ukujoyina naye ekubaleni ukuba umculo ungasiphakamisa" kwiGround Higher, "baza bazisa abaphulaphuli ngeengoma ze-cappella zeengoma zakhe zakudala ezivela kwi-albhamu yaloo nyaka ka-1973, i- Innervisions.
NgoFebruwari 13, 2005 - UAlicia Keys / Jamie Foxx / Quincy Jones ngo-47 uAn. Grammys
u-Foxx no-Alicia Keys benza kwi-Grammy Awards ka-2005. UFrank Micelotta / Getty Izithombe
U-Alicia Keys, uJamie Foxx kunye noQuincy Jones bazinikela ekupheleni kukaRay Charles kwi-47 ye-Grammy Awards ngonyaka we-47 owawubanjwe ngoFebruwari 13, 2005 kwi-Staples Centre eLos Angeles, eCalifornia. Emva kokumbetha "Ukuba andinakuye" ephumelele ukuSebenza koBuchule boBuchule boBuchule bamaR & B, amaKhitshi ahlanganiswa kwisigaba sikaCharles 'umhlobo omdala, uJonathan noFoxx, owawunqoba u-Oscar uveza uCharles kwifilimu ka-2004, uRay . U-Foxx wathi, "Ngomhlobo omdala," ngaphambi kokuba baphakamise abaphulaphuli ngoluhlobo oluvuyisayo lweColor's classic "Georgia On My Mind" kunye noJones oqhuba i-orchestra. Ngobo busuku, i-albhamu ye-posthumous duet albhamu, iGenius Loves Inkampani , yawina amabhaso asibhozo, kuquka ne-albhamu yonyaka.
UCharles wafa ngoJuni 10, 2004 eneminyaka engama-73.
NgoFebruwari 27, 2002 - uMary J. Blige kwi-Award ye-Grammy ye-44
UMary J. Blige owenza ama-Grammy Awards ka-2002. UFrank Micelotta / umfanekiso weKhowudi
UMary J. Blige wonyulwa ngamabhaso amabini kwi-44 ye-Grammy Awards ngonyaka owawubanjwe ngoFebruwari 27, 2002, nangona akazange aphumelele, wenza isitatimende somculo sikhunjulwa ngabantu bonke ababekho kwiSpaples Centre eLos Angeles, eCalifornia. "U-Queen of Hip-Hop Soul" uye waphakanyiswa kwiNtsebenzo yoBuchule boBuchule boBuchule bamaR & B boBuchule be-"Family Affair," kunye ne-albhamu ephezulu yeR & B ye- No More Drama . Isihloko sesigxina sasingu-mantra yakhe entsha, kwaye wayenza ngenkohlakalo enokuthi uvumele ilizwe liye latshintshile ubomi bakhe kwaye labeka konke ukungabi nalutho emva kwakhe.
2005 - Usher / James Brown kwi-47 ye-Grammy Award
U-Usher noJames Brown benza kwi-47 ye-Grammy Award. KMazur / WireImage kwi-Academy Yokuqopha
Enye yemidaniso enkulu yokudanisa kwiGrammy yavela kwi-47 ye-Grammy Awards eyayibanjwe ngoFebhuwari 13, 2005 kwiSikhungo saseStaples eLos Angeles, eCalifornia xa umfundi, u-Usher, wadibana nesithixo sakhe, uJames Brown. U-Usher waqala ukwenza i-"Caught Up" yakhe esuka kwi- Confessions ephumelele kwi-Best Contemporary R & B Album. Watshengisa abaphulaphuli ngemigangatho yakhe emangalisayo, ngoko wajoyina i-Godfather yoMphefumlo ngomboniso wokudansa ngokumangalisayo njengoko becula ingqungquthela yakhe ethi, "Vuka (Ndivakalelwa Njengaye)."
NgoFebruwari 8, 2006 - U2 / uMary J. Blige kwi-48 ye-Grammy Awards
UMary J. Blige wenza uBono no-U2 kuma-Grammy Awards ka-2006. UMary J. Blige ujoyina uBono kunye neqela lakhe u-U2 ukuze enze 'iLungu' (Ifoto nguKMazur / WireImage ye-Academy Recordings
I-U2 yayinomdla omkhulu kwii-48 ze-Grammy Awards eziye zaqhutywa ngoFebruwari 8, 2006 kwi-Centre Staples, kwaye enye yezinkumbulo ezintle zobusuku yayikusebenzisana noMary J. Blige. Ibhendi yase-Ireland yanqoba ama-5 amabhaso kuquka ne-albhamu yonyaka malunga nendlela yokuxhathisa ibhomu ye-Atomic , kwaye babelana ngesigaba "ngo-Queen of Hip-Hop Soul" ngokusebenza ngamandla "kweLowo" okhethwe ngonyaka olandelayo Ukusebenzisana kwePop kunye noVocals.
NgoFebruwari 23, 1983 - uMarvin Gaye kwii-Grammy Awards zama-25 zeNyaka
UMarvin Gaye. Paul Natkin / WireImage
UMarvin Gaye wamphumelela nje i-Grammys ezimbini ngexesha lakhe lomsebenzi; zombini kwi-25 ye-Grammy Awards eyaqhutywa ngoFebruwari 23, 1983 kwi-Shrine Auditorium eLos Angeles, eCalifornia. I-Gaye "Ukuphulukiswa ngokoSondo" yahlonishwa kwiNgcaciso yeR & B eSebenzayo, i-Male, kunye neyona ndlela ephezulu yeR & B. Wahlabelela ingoma yakhe yokunqoba kwi-Shrine Auditorium ngaloo ndlela kusihlwa eLos Angeles, eCalifornia, nangomnyaka olandelayo, ngo-Ephreli 1, 1984, ngolunye usuku ngaphambi kokuzalwa kwakhe kweminyaka engama-45 ubudala, wadutshulwa nguyise.
NgoFebruwari 24, 1987 - uJanet Jackson kwi-29 ye-Grammy Awards
UJanet Jackson. UMichael Ochs Archives / Getty Izithombe
UJanet Jackson watyunjwa abathathu, kuquka i-albhamu yoNyaka woLawulo, kwi-29 ye-Grammy Awards yonyaka we-29 eyayibanjwe ngoFebhuwari 24, 1987. Nangona akazange aphumelele, waphuma emthunzini womntakwabo, uMichael Jackson, wabonisa ukuba Kwakhona umnandi omkhulu. "Yintoni Endiyenzile Kwamhlanje?" ukusuka kwi- Control yenyuka kwi-Best R & B Ingoma, kwaye u-Miss Jackson waphendula umbuzo ngegama lokumemeza eligunyazisiweyo, ulawule isigaba kunye nomsebenzi wakhe wokuthakazelisa kwi-Shrine Auditorium eLos Angeles. Ukongeza intle "yezinto ezimbi," wajoyina uJimmy Jam, uTerry Lewis, kunye noJérome Benton kwixesha.
NgoFebhuwari 11, 2007 - uKrestuina Aguilera kwi-49 ye-Grammy Awards
hristina Aguilera owenza kwi-Grammy Awards ka-2007. Kevin Winter / Getty Izithombe
UJames Brown wafa ngoDisemba 25, 2006, kwaye xa kwaziswa ukuba uKristu Christina Aguilera wayeza kumnika umvuzo kuye kwi-49 ye-Grammy Awards ngonyaka ka-11 ku-2007, kwi-Staples Centre eLos Angeles, eCalifornia, kwakukho ukungaqiniseki ukuba ukwenza ubulungisa "UThixo weMphefumlo." Wazibonakalisa engathandabuzekiyo ngokupheleleyo kwinqaku yakhe yokuqala, ngokukhawuleza ukubethelela iklasi yakhe, "Yindoda yomntu womntu." Njengowomculo othi "Umntu onzima kunazo zonke ekuboniseni ishishini" wadlala emva kwakhe, u-Aguilera wathola ukuma, ehla emadolweni kwaye esebenza i-microphone kwisiko elizukileyo esithi "Mnu Nceda, nceda, nceda, nceda."
NgoFebruwari 10, 2013 - UJustin Timberlake / Jay-Z kwi-55 ye-Grammys yonyaka
UJustin Timberlake noJay-Z benza ii-Grammy Awards ze-2013. Kevork Djansezian / Getty Izithombe
I-Grammy Awards yama-55 ngonyaka ka-Febhuwari 10, 2013 kwi-Staples Centre eLos Angeles, eCalifornia yabonisa ukubuya kukaYustin Timberlake, owavela emva kwee-hiatus zonyaka ezisixhenxe ekusebenzeni. Wabuya womelele ngobuhle besikolweni esidala kunye ne-tuxedo flair, ekwenza "U-Suit and Tie" kunye no-Jay-Z, kunye ne "Pusher Love Girl" kunye ne-orchestra epheleleyo. Zomibini iingoma zanqoba iGrammys kunyaka olandelayo ngo-2014.
NgoFebruwari 11, 2007 - UChris Brown kwi-49 ye-Grammy Awards
ULionel Ritchie, uChris Brown noSmokey Robinson kuma-Grammy Awards ka-2007. Kevin Winter / Getty Izithombe
UChris Brown ukhethwe nguMculi Omtsha oMtsha ngo-2007, kwaye nangona engazange aphumelele, wabonisa ukudansa okungakumbi kwiGrammy kwimbali xa wenza "Qhawula!" kwii-49 zee-Grammy Awards ezenziwa ngeCawa ngoFebruwari 11, 2007 kwiziko laseStaples eLos Angeles, eCalifornia. UBrown walandela iingoma zikaLionel Richie kunye noSmokey Robinson, owamgqala kwisigaba emva kokusebenza kwakhe.
"Ngaba Ufuna I-Old Lobby Yayihlambuluke" Iingoma
I-Top 10 Pitbull Iingoma
Iprofayile yoMculi weLuntu
Funda iziNgcebiso zeFrentshi kunye namadolophu kunye neeIqithi
I-Etiquette yePagan ne-Wiccan
Imfazwe YaseMelika: Imfazwe yesithathu yaseWinchester (Opequon)
Isisombululo, ukuQinisa, iColloids, kunye neAperpersions
Iingoma ezi-10 eziphezulu ezizenzekelayo
Ziziphi iinjongo kwiFiction and Nonfiction?
Isingeniso kwi-Guitar Learning kubaqalayo